सञ्जय दत्तले आफ्नो बायोपिक 'सञ्जु' बाट कति कमाई गरे ?
सञ्जय दत्तले आफ्नो बायोपिक ‘सञ्जु’ बाट कति कमाई गरे ?
असार २५, २०७५ बिगुल न्यूज - DG
काठमाडौँ : बलिउड अभिनेता सञ्जय दत्तको जीवनमा आधारित फिल्म ‘सञ्जु’ ले बक्स अफिसमा धूम मच्चाईरहेको छ र फिल्मसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई पनि करोडौंको फाईदा भएको छ। सामान्यतया कसैको बायोपिक बनेमा फिल्म बनाउनको लागि राइट्स दिएको बदलामा फिस लिने गर्छन्।
सञ्जय दत्त र राजकुमार हिरानी अत्यन्तै घनिष्ठ मित्र हुन्। ‘सञ्जु’ को निर्माता विधु विनोद चोपडाको तीन फिल्ममा पनि सञ्जय दत्तले काम गरिसकेका छन्। त्यसैले यस्तो मानिएको छ कि सञ्जय दत्तले केही पनि लिएका छैनन्। तर वास्तवमा यस्तो भने होइन।
बलिउड पण्डितहरुका अनुसार सञ्जय दत्तको टिमले पैसाको लागि धेरै मोलमोलाई गरे र अन्ततः ९ देखि १० करोड भारतीय रुपियाँमा सहमत भए। साथै यो पनि तय भयो कि फिल्मको नाफाको केही हिस्सा पनि सञ्जय दत्तले पाउनेछन्।
‘सञ्जु’ मा सञ्जय दत्तको पहिलो र दोस्रो पत्नीको तथा गर्लफ्रेन्डहरुका बारेमा केही पनि बताईएको छैन। केही घटना पनि उल्लेख गरिएको छैन। सञ्जय दत्तले फिल्म बन्नु अघि नै शर्त राखेका थिए कि यी कुराहरु फिल्ममा देखाईने छैन र त्यस पछि मात्र फिल्म बनाउन इजाजत दिने भनेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएको छ। एजेन्सी
प्रकाशित : सोमबार, असार २५, २०७५१३:३०
फिल्ममा फ्लप भए तापनि यसरी खुब पैसा कमाईरहेका छन् बलिउडका यी ५ अभिनेत्री, अन्तिम वाली कमाउँछिन् सबैभन्दा बढी
पहिलो फिल्ममा यी चर्चित अभिनेताकी हिरोईन बन्न थिएनन् कोहि पनि तयार, यस्तो छ कारण!
वर्षाको टिकटक क्रेज: छोडिनन् जितु नेपाललाई (भिडियो)
प्रेम सम्बन्ध त टुट्यो तर मायामा भने कमि आएन ! ब्रेकअप पछि पनि राम्रो सम्बन्ध भएका जोडीहरु !
सायद अर्जुनलाई भुल्न सकेकी छैनन् यी अभिनेत्रीले, प्रेमसम्बन्धबारे खुल्यो यस्तो रहस्य!
‘कथा काठमाडौँ’ को ट्रेलर रिलिजपछि प्रियंकाले खोलिन् मुख, दिईन कडा जवाफ!
“ल भन्नुस् ऋषिजी तपाईले निर्माण गर्नु भएको चलचित्र फ्लप भएको भने के गर्नु हुन्छ ? जनता जान्न चाहन्छन् !”
९ मिनेट अगाडि बिगुल
४७ मिनेट अगाडि PARWATI